Libretorrent emelitere na nkwado maka nchekwa mpụga | Gam akporosis
Ọ bụrụ na enwere ngwa maka nbudata iyi na gam akporo, ọ bụ Libretorrent. Ma ọ bụrụ na ọ na-ama arụ ọrụ luxuriously, ugbu a na mbipute 2.0 nke Libretorrent ị ga - enwe ohere nke iji mpụga draịvụ mpụga ma ọ bụ kaadi microSD dị ka oghere maka ibudata iyi.
Ngwa mmeghe mepere emepe nke so n’etiti ndị kachasị mma, nke ahụ na mbipute 2.0 na-ewe nnukwu ikike iji wee tọghata a mbadamba ma ọ bụ ama nwere kaadi microSD mgbakwunye na ngwaọrụ zuru oke iji lekọta agha iyi.
1 Ihe ngwa maka iyi
2 Ozi niile na mbipute 2.0
Ihe ngwa maka iyi
Ọ bụrụ na ị maghị libretorrent, anyị na-achikota ya ngwa ngwa. Ọ bụ ahịa iyi iyi iyi ahịa inweta ihe niile si n'efu na-enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla na-emebi nnukwu ahụmịhe ọ na-enye. N'ezie ọ bụ n’etiti ngwa m kacha amasị m maka gam akporo na maka nbudata ụdị faịlụ a eziokwu na ọ na-arụ ọrụ dịka amara.
Ihe mbụ na-apụ apụ bụ maka bụrụ onye mepere emepe na enweghị mgbasa ozi. Nke mbu putara na onye obula maara banyere koodu nwere ike iga github ka lee ya anya ma hu koodu ya dum. Gịnị na-azọpụta anyị ụjọ na ịmara na anyị na-eche ihu na ngwa nke na-arụ ọrụ zuru oke na-enweghị ụdị ọ bụla nke koodu ọjọọ ma ọ bụ na nzube ọjọọ.
Nke abụọ, enweghị mgbasa ozi ma na-enye ihe niile n'efu. Ọ bụghị ndị ahịa niile nwere ike ikwu maka ya n'otu ụzọ. Anyị nwekwara ike igosipụta ezigbo imewe na omume magburu onwe ya na usoro nke nhọrọ dị egwu iji hazie ahụmịhe iyi egwu. Bịanụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-akọ ya, ọ bụrụ na anyị tinye akụkọ 2.0 ugbu a na akụkọ niile, ọ ga-adị mma ma zuo oke.
Ozi niile na mbipute 2.0
N'ime akwụkwọ akụkọ ndị a niile, anyị na-egosipụta nkwado zuru oke maka nchekwa dị na mpụga. Nke ahụ bụ, gịnị ka ị ga-enwe ike jikọọ eriri USB ma ọ bụ ihe mpụga ike mbanye gị mobile, dị ka iji microSD na oghere nke abụọ nke Galaxy Note 10 gị, dị ka ohere ebe a ga-ebudata faịlụ ahụ. Ọbụlagodi na ịnwere tebụl nwere nkwado OTG, ị ga - enwe ike dochie PC maka nsogbu ndị a.
Ihe eji emepụta ihe 2.0 bụ ihe ọzọ kachasị mkpa iji mee ka ahụmịhe onye ọrụ nyere gị aka na, ọ bụrụ na ọ dịla mma, ugbu a na-acha ya. Anyị na-aga na ndepụta nke akụkọ:
Nkwado zuru ezu maka nchekwa dị na mpụga (Kaadị SD, ngwaọrụ USB, wdg). Anyị na-eche ihu na ọrụ nyocha, yabụ enwere ike ịnwe ahụhụ. Atụmatụ ahụ iji hichapụ faịlụ ebudatara mgbe a na-ehichapụ iyi ka na-arụ ọrụ.
Ihe eji emepụta 2.0
N'ihi mgbanwe na nchekwa data, iyi ndị agbakwunyere ga-ebubata na akpaghị aka. N'ihe banyere ọdịda, otu faịlụ iyi ga-adị na folda "LibreTorrent_backup" nke ndekọ ụlọ.
"Wepu oyiri" nhọrọ na ntọala RSS
Nhọrọ «Eleghara free ohere size»Na tinye iyi dialog
Nhọrọ "ọnọdụ a na - amaghị aha" na "Njikọ na - apụ apụ maka mkpụrụ" na ntọala Network
Chekwaa mgbanwe na windo nkọwa iyi
Ndozi na mmụba nke nkwụsi ike
Nkwado emelitere maka iyi nwere ọtụtụ faịlụ
A sụgharịrị nsụgharị ọhụrụ gaa n'asụsụ ọhụrụ 7. N'ikpeazụ, ugbu a, otu n'ime ndi ahia kacha mma maka gam akporo gi. Ọ bụrụ na ị nyeghị ya ohere tupu, ugbu a bụ oge kachasị mma maka onye ahịa PC na-anọchi ya. Ọ bụrụ na inwee mbadamba nkume na nkwado OTG, nabata 2.0 ka ị nwee ike iji draịvụ ike mpụta ma hapụ onye ahịa na-arụ ọrụ ụbọchị niile maka oke, nwee ọ !ụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-emelite Libretorrent na 2.0 yana ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ: nkwado maka nchekwa dị na mpụga, Ihe Ekike 2.0 na ndị ọzọ
Ọ dị mma, ebe ị naghị etinye nkuzi banyere otu esi eji ya, enweghị m ike ịhụ isi ihe dị na ibudata iyi. Mgbe ị nwere ike, ị na-egosipụta ya. Daalụ.
Zaghachi ka Mid
Ndewo Mid! Kedu nsogbu ị nwere? You wụnye ngwa. Download na - ebudata iyi, bido ya na ọ ga - ejikọ gị na onye na - enye aka ịmalite ya.